XOG: Halkee Ayey Barcelona Ku Jiri Lahayd Haddii Lionel Messi Uu Xili Ciyaareedkan U Safan Lahaa Real Madrid? – Akhriso Rajo La’aanta Barca Ee Messi La’aantii – Cadalool.com
Real Madrid waxay la dhici doontaa farxad marka uu Lionel Messi ku dhawaaqo inuu ka fadhiistay kubadda cagta amaba uu uga dhaqaaqo koox kale oo sidii qorshihiisu ahaa uu usii ciyaari doono naadi reer Argentine ah marka uu ka dhaqaaqo Barcelona.
Inkasta oo xiisihii iyo xamaasaddii badnayd ee kulanka El Clasico uu lumay, una jan-jeedhsamay dhinac kaliya, haddana Los Blancos marna isma dhiibin, balse waxa guusha si isku-xig-xigta u qaadata Barcelona.
Muddadii uu xidhnaa funaanadda Barcelona, xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi waxay kasoo bilaabmaysaa sannadkii 2005 oo ah xilligii uu ciyaaryahannada rasmiga ah ka mid noqday, waxaanu illaa waqtigaas u horseeday inay ku guuleystaan 32 koob oo intooda badan uu isagu lugtiisa guusha ugu horseeday.
Kulamada sida weyn uu guulaha uga keeno, waa kuwa ay kooxdiisu ka hor-tagto Real Madrid ee loo yaqaano El Clasico, waxaanu Messi ka dhaliyey 26 gool 39 ciyaarood oo uu saftay, waana ninka goolasha ugu badan ka dhaliyey ciyaartan.
32 jirkan ayaa waxa uu isku-geyn goolashiisa xili ciyaareedkan ee Barcelona uu u dhaliyey ay yihiin 33 gool, waxaanu hoggaaminayaa tartanka Kabta dahabka ah ee qaaradda Yurub, halka Karim Benzema oo ah laacibka ugu goolasha badan Real Madrid uu illaa hadda dhaliyey 19 gool oo 11 ka mid ah ay yihiin horyaalka LaLiga.
Haddaba sidee ayey Barcelona noqon lahayd haddii uu bilowgii xili ciyaareedkan Lionel Messi ka dhaqaaqi lahaa sidii uu Cristiano Ronaldo mar kaliya uga baxay Real Madrid?
Waa su’aal aan la qiyaasi karin saamaynta ay ku yeelan lahayd Barcelona iyo siday u noolaan lahayd isaga la’aantii, sidaas oo ay tahayna waxa kasii darraan lahayd haddii uu ka degi lahaa Santiago Bernabeu.
Warbaahinta Planet Football ayaa waxay soo bandhigtay xog cajiib ah oo ku saabsan haddii uu Lionel Messi bilowgii xili ciyaareedka ku biiri lahaa Real Madrid, sida uu noqon lahaa horyaalka LaLiga iyo halka ay Barcelona kaga dhamaysan lahayd.
August illaa November – Real Madrid ayaa tirsan lahayd dhibcaha ugu badan ee horyaalka
Iyada oo magaalada Barcelona looga barooranayo bixitaanka Messi oo weliba u ciyaaraya cadowgooda, Real Madrid waxay nasiib u heli lahayd mucjisooyinka Messi oo hoggaanka horyaalka gacanta u gelin lahaa.
12-kii ciyaarood ee ugu horreeyey, Los Blancos waxay ku guuleysan lahayd 11 ka mid ah, mid kalena waxay geli lahayd barbar-dhac, iyadoo uu Messi u dhalin lahaa siddeed gool.
Barcelona 12-keeda ciyaarood ee ugu horreeya, waxay ka heli lahayd 19 dhibcood oo kaliya, waxaanay 15 dhibcood ka dambayn lahayd Real Madrid, iyadoo aan wax guul ah aragteen dhamaan ciyaarihii bisha November.
Riix 2 si aad u akhrisato xogta oo dhan